ဗီဒီယိုများ | PitePite
ဒစ်ဂျစ်တယ် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ပညာပေး ဗွီဒီယိုများ
အချိန်လား? ငွေလား? ----------------------- ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ခဝင်ငွေ တစ်နာရီ ၄၅၀ ကျပ်။ ကိုယ် ဝယ်ချင်တဲ့ နာရီက ၄၅,၀၀၀ ကျပ်။ ဒါဆို ဒီနာရီ ဝယ်ဖို့ နာရီ ၁၀၀ အလုပ်လုပ်ဖို့လိုမယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဖုန်းက ၄၅၀,၀၀၀ ကျပ်။ ဒါဆို ဒီဖုန်းဝယ်ဖို့ နာရီ ၁,၀၀၀ အလုပ်ဖို့လိုမယ်။ ကိုယ့်အတွက် အရေးပါတာ၊ အရေးကြီးတာ အချိန်လား၊ ငွေလား။ Ref: Erik Bergman သူငယ်ချင်းတို့ လိုချင်တာ လိုအပ်တာ မဝယ်ခင် ကိုယ့်ရဲ့ ငွေကိုသာမက အချိန်တွေကိုပါ ထည့်တွက်ကြဖို့ မမေ့နဲ့နော်။ #pitepite #financialliteracy #budget #moneymanagement
ပိုက်ဆံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ အကျင့်ဆိုး
သူငယ်ချင်းတို့အတွက် ပိုက်ဆံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ အကျင့်ဆိုးတချို့ ပြောပြမယ်နော်။ အဲဒါတွေကတော့ 👉 ၁. ကိုယ့်ဝင်ငွေနဲ့ မဝယ်နိုင်ဘဲ၊ မဝယ်သင့်ဘဲ သူများသုံးတိုင်း လိုက်သုံးတာ 👉 ၂. ပိုက်ဆံဝင်လာရင် သုံးပြီးမှ စုဖို့ စဥ်းစားတာ 👉 ၃. ကိုယ့်ရဲ့ ဝင်ငွေထွက်ငွေမသိဘဲ ပိုက်ဆံကို ပရမ်းပတာသုံးတာ 👉 ၄. ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်သင့်ပြီလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေချာနေချိန်မှာ တွေဝေနေတာ ကဲ . . . သူငယ်ချင်းတို့လဲ ဒီအချက်လေးတွေဖတ်ပြီး အကျိုးရှိနိုင်ကြပြီး ငွေကြေးသောကတွေ ကင်းကြပါစေ။ #pitepite #financialliteracy
အရေးကြီးတာက "ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ရှေ့ကို ဆက်လက်ချီတက်နေဖို့ပါ" အရေးကြီးတာက "ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ရှေ့ကို ဆက်လက်ချီတက်နေဖို့ပါ" ---------------------------------------------------------------------- “မင်း ကောင်းကင်မှာ မပျံသန်းနိုင်ရင် . . . . ပြေးပါ 🏃‍♀️🏃‍♂️ မပြေးနိုင်ရင် . . . . လမ်းလျှောက်ပါ 🚶‍♀️🚶‍♂️ လမ်းမလျှောက်နိုင်ရင် . . . . တွားသွားပါ 👩‍🦽👨‍🦽 အရေးကြီးတာက . . . . . ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ရှေ့ကို ဆက်လက်ချီတက်နေဖို့ပါ"လို့ မာတင်လူသာကင်းက ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ပိုက်ပိုက်သူငယ်ချင်းတို့လဲ ကိုယ်ရောက်နေတဲ့ နေရာမှာ ရပ်မနေဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် တမူထူးခြားတဲ့ အားသာချက်တွေကို အသုံးပြုပြီး ကိုယ့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်တွေကို ရောက်အောင် ကြိုးစားကြဖို့ စိတ်ခွန်အားပေးထားတဲ့ ဒီဗီဒီယိုလေးကို ကြည့်ရင်း အားတင်းထားကြပါစို့နော်။ 💪💪💪 #PitePite #quote #MartinLutherKingJr. #motivation
ဘဝမှာ လောကဓံလှိုင်းလုံးတွေကို တစ်လုံးပြီး တစ်လုံး တစ်ကြိမ်ပြီး တစ်ကြိမ် ကြုံကြရပါတယ်။ လဲကျခဲ့တဲ့ လူတွေကို အားယူပြီး ပြန်ထနိုင်အောင် ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ ဗေဒါလမ်းကဗျာလေးထဲကို အရှုံးမပေးခဲ့တဲ့ မဗေဒါလို အမျိုးသမီးတစ်ယောက် အကြောင်းကို ထပ်ပြီး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ အားလုံး အောင်မြင်ကြပါစေလို့ ပိုက်ပိုက်က ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ 💪💪💪 “ ညို ပြာပြာ လတာပြင်ခြေရင်း လှိုင်းတက်ရာ ဗေဒါတက်၊ လှိုင်းသက်ရာဆင်း ။ ဆင်းရလည်း မသက်သာ အုန်းလက်ကြွေရေပေါလော၊ မျောစုန်လို့လာ အဆင်းနဲ့အလာ၊ ဗေဒါမ အထွေး အုန်းလက်ကြွေ သူ့နံဘေး၊ ဆောင့်ခဲ့ရသေး ။ ဆောင့်ခဲ့လည်း မသက်သာ နောက်တချီ ဒီတစ်လုံးက၊ ဖုံးလိုက်ပြန်ပါ မြုပ်လေပေါ့ ပေါ်မလာ၊ မဗေဒါအလှ တစ်လံကွာ လှိုင်းအကြွ၊ ပေါ်လိုက်ပြန်ရ ။ ပေါ်ပြန်လည်း မသက်သာ ချောင်းအဆွယ် မြောင်းငယ်ထဲက၊ ဘဲထွက်လို့လာ ဘဲအုပ်မှာ တစ်ရာနှစ်ရာ၊ဗေဒါက တစ်ပင်ထဲ အယက်အကန်ခံလို့ ဗေဒါပျံအံကိုခဲ၊ ပန်းပန်လျက်ပဲ...။” #ဇော်ဂျီ ပိုက်ပိုက်တို့ဖတ်ဖူးတဲ့ ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ ဗေဒါလမ်း ကဗျာလေးထဲကလိုပေါ့ သူငယ်ချင်းတို့ရေ။ ဘဝမှာ အခက်အခဲဆိုတာ လူတိုင်းမှာ ရှိကြရတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘဝလှိုင်းတွေ ဘယ်လောက်ကြမ်းကြမ်း ဘယ်တော့မှ အရှုံးမပေးခဲ့တဲ့ မဗေဒါလို အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဘဝအကြောင်းကို စိတ်ခွန်အားဖြစ်အောင် ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ် သူငယ်ချင်းတို့ရေ။ #WSD2020 #WorldSavingsDay2020 #SaveForFutureMyanmar #PitePite #ပိုက်ပိုက် ဒီ ပို့စ်လေးကို World Savings Day 2020 အထိမ်းအမှတ်အတွက် ဂျာမန် ကော်ပိုရေးရှင်းနဲ့ Savings Banks Foundation for International Cooperation (SBFIC) တို့မှ ကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။
4 Saving Trick
Think before get Loan
Budget Lists Application